HARGABKA SHIMBIRUHU WUXUU KU FIDAA DHAMMAAN YURUBTA - YURUB
Ugu Weyn Ee Yurub
Hargabka shimbiruhu wuxuu ku fidaa dhammaan Yurubta
Daawooyinka shimbiraha ee hargabka cusub ee H5N8 ayaa lagu soo warramey guud ahaan Yurub. Laba cudur oo cusub ee fayruuska ah ayaa laga helay beeraleyda Polishka iyo beeraleyda ku yaalla gobollo kala duwan, iyagoo diley qiyaastii 4,000 oo shimbir. Cudurka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay 10 kun oo shimbir oo ku yaal beerta Yukreeniya ee gobolka Odessa.
Laakiin ma ahan oo kaliya shimbiraha beeraha ka soo gaaray cudurka: Todobaadkii hore ee Faransiiska, virus ayaa lagu ogaaday shimbiraha duurjoogta ah, marka lagu daro 34 dillaaca digaagga. Marka la eego hirgelinta tallaabooyin ka hortag ah ee lagu gowraco hilibka digaaga ee gobollo badan oo dalka ka mid ah, waxay ogaatay faafitaanka hargabka, oo lagu tilmaamay calaamadaha kiliinikada. Natiijo ahaan, 52,000 oo shimbirood ayaa beeray, 2,000 oo kalena waxaa burburiyay fayraska.
Jarmalka, qiyaastii 70 kun oo turkiga ah waa in la burburiyaa beeraha saddex magaalo oo kala duwan, halkaas oo shan faafa oo fayruska la ogaaday. Sidoo kale, tiro badan oo ka mid ah shimbiraha bukaanka ah ee Nederland ayaa horeba loo soo sheegay.
Croatia ayaa ku soo warramey in ay dillaacday hargab cusub oo ku saabsan beer ku yaal gobolka Zagreb, halkaas oo 40 shimbir u dhinteen, iyo sidoo kale tiro fara badan oo digaagga duurjoogta ah meelo kale. Wadamada Czech Republic ayaa la xanuunsaday cudurka.
Slovakia, laba faafa oo cusub ee fayruska ah ayaa laga helay qoysaska, iyo sidoo kale cudur ka dilaacay shimbiraha duurjoogta ah. Dalka Roomaaniya, sida ku sugan Czech Republic, cudurka ayaa taabtay duufaannada. Giriigga, weerarka hargabka shimbiraha ayaa ku dhacay mid ka mid ah beeraha digaaga, taas oo sababtey 28,000 oo shimbir la burburiyay.
Koonfurta-galbeed ee Russia, saddex beeraley ah ayaa la soo gaarsiiyey dhowr gobol, kuwaas oo 2530 ku dhintay shimbirihii iyo in ka badan 219 kun la gowracay si looga hortago faafidda cudurka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Yurub 2020